Mahajanga: 1 629 ireo traboina no nanao asa-tànamaro atakalo sakafo | Région Boeny
Mahajanga: 1 629 ireo traboina no nanao asa-tànamaro atakalo sakafo
19 mars 2015 A La Une, Actualité
Vary, menaka, siramamy, voamaina sy savony ary fanadiovan-drano sur’eau no natolotra ireo traboina miisa 1 629 avy amin’ny Fokontany Mahavoky avaratra, Tsararano Anosikely, Tsararano Ambany sy Ambalavola ary Fiofio, ny 14 Martsa 2015, teo anoloan’ny Biraon’ny Distrikan’i Mahajanga I, ho sandan’ny asa-tànamaro nataon’izy ireo.
Fanesorana ireo loto tanaty tatatra sy nanerana ny tanàna, nandritry ny tontolo andron’ny zoma 13 Matrsa 2015. Loto izay navelan’ny ranobe nahadobo ireo Fokontany ireo, roa herinandro lasa izay, no asa-tànamaro nifandrimbonan’ireo traboina.
Tonga nijery ny fahavoazan sy ny asa fanadiovan’izy ireo, nisolo-tena ny fitondranm-pajankana, ny Sekretera mpanatanteraky ny BNGRC, Atoa Lomotsy Ludovic Christian ny BNGRC io Sabotsy io. Taorian’izay izy dia nizara ireo fanampiana sandan’ny asa-tànamaro, notron’ny Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy teto Mahajanga, Atoa Nicolas Stéphan. Nisy tamin’ireo fanampiana ireo no tolo-tànana avy amin’ny Polisim-pirenena sy ny Bianco Mahajanga ary ny Faritra Boeny, izay samy nisalahy avokoa tamin’ny fizarana io andro io, nanampy ny Sefo fokontany sy ny Vokovoko mena.